Akpaghị aka Ule na njikarịcha nke Mobile App gị na ịja mma | Martech Zone
Akpao ule site na aka bụ onyinye zuru oke nke na-eme ka mkpanaka gị yana ngwa weebụ na-eme omume oge niile site n'otu ụlọ gaa na nke ọzọ. M na-agwakarị ndị mmadụ na ọ bụrụ na ị chepụta ma ọ bụ mepee ihe ọ bụla ma jụọ maka nzaghachi, ị ga-enweta nzaghachi na-enweghị isi nke na-abụghị ezigbo ma ọ bụ ọnụọgụ. Jụ mmadụ maka nzaghachi dị ka ịjụ, “Can nwere ike ịchọta ihe ọ bụla dị njọ na nke a?” na onye ọrụ ule na-aga site nkịtị ojiji ka naanị na-achọ mmejọ.
Inweta ikpo okwu ebe ị nwere ike ịnwale ngwa gị nke ọma iji nweta nzaghachi dị mma ga-eme ka ị hụ na ị na-ebugharị ikpo okwu gị n'ụzọ ziri ezi, melite nnabata, ma mechaa belata ahịa na mmepe. Aka nwere ezigbo ebook, Wzọ 5 iji merie ekwentị na akpaaka nke ahụ na-akọwa njedebe na omume kacha mma nke ngwa mkpanaka na-anwale ngwa ngwa ekwentị - hụ na ibudata ya.
Akpaaka Ule Mobile App site na aka
Akụrụngwa ule kụrụ aka gụnyere:
Aka Akwụrụ - ndị ọkachamara na-akpaghị aka na-arụ ọrụ wuru ma dabere na asụsụ na ngwaọrụ ndị na-eduzi ụlọ ọrụ. N’ikwado ọtụtụ afọ nke ahụmahụ, usoro a na-enweta ngwa ngwa gị ma na-agba ọsọ ọsọ ma na-eme ka ha na-agba ọsọ na njikọ ọ bụla nke Weebụ, iOS, na gam akporo.
Kpaa obodo niile na-anwale - ọkachamara injinia na akụrụngwa nwere ọtụtụ afọ na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ kachasị ukwuu n'ụwa. A na-ekenye ndị ahịa akpaaka otu ndị raara onwe ha nye iji hụ na ihe ịga nke ọma gị bụ ndị na-achịkwa usoro, ngwaọrụ, na ijikọta, dee okwu nyocha na edemede, wee lelee nyocha ọ bụla. Nọdụ ala ma zuru ike mgbe anyị lebara ahụ ike nke ngwa gị anya.
Akpaaka Dashboard - nyocha ngwa ngwa banyere ahụike nke ngwa gị ugbu a na n'oge gara aga na-ewuli. Ikuku ole ka anyị kpughere, pasent ole nke ule anyị gafere, ànyị na-emeziwanye ma ọ bụ na-akawanye njọ? Mepee dashboard ma chọpụta.
Tags: na-akụakpaaka ngwa ngwa mkpanakannwale ngwa mkpanakaedemede ederede ngwa mkpanakannwale ngwa ngwa mkpanakaule dashboard
Jul 2, 2015 na 3:06 PM
A bịa n’ahịa ngwa mkpanaka, akpaaka bụ isi. Gaghị atụ anya ka ndị mmadụ soro gị rụọ ọrụ site na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụrụ na ị naghị ezipụ ozi ruru eru na nkeonwe. Echere m n’ezie na anyị ga-ahụ ọtụtụ nyocha akpaaka n’ọdịnihu dị nso, nke a dị mma!